Ganacsiga Mark & ​​Diiwaangelinta Patent ee Shiinaha - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Si aad u sii ilaaliso astaantaada qiimaha leh iyo xuquuqda daabacaadda alaabada, kooxda ganacsiga ee Fumax ayaa kaa caawin karta raacitaanka nidaamka muhiimka ah:
1. Diiwaangeli sumaddaada ganacsi ee Shiinaha.
2. Ku dhaji patent-ka Shiinaha magacaaga.
Kooxda Fumax waxay si joogto ah u kormeeri karaan haddii sumaddaada ganacsi ama patent-kaaga ay isku dhacaan dhinacyo kale. Waxaan ku siin doonaa warbixin si joogto ah.
Sidee loo sameeyaa diiwaangelinta sumadda Shiinaha?
Way fududahay mana fududa. Astaan ​​ganacsi waa astaan ​​u adeegaysa ujeeddada gaarka ah ee aasaasiga ah ee lagu aqoonsanayo alaabada ama adeegyada soo saare, taas oo u oggolaanaysa macaamiisha inay kala soocaan alaabada ama adeegyada mid soo saare ka ah kan kale.
Qof kastaa wuu ogyahay in caalamiyeynta ay si adag isugu xiran tahay meelo kala duwan, isgaarsiinta, safarka adduunka, horumarinta ganacsiga. Waxaan isku muujineynaa waqti gaaban internetka, si la mid ah sida alaabtayada ama adeegyadeena ay sameeyaan. Ilaalinta astaantaada ama astaantaada astaanta ah ayaa si dhab ah muhiim u ah, kaliya maahan suuqa xaafaddaada, laakiin sidoo kale adduunka oo dhan. Shiinuhu wuxuu door muhiim ah ka qaataa dhaqaalaha adduunka oo dhan suuqa suuqyadiisa. Tani waa sababta aad ugu baahan tahay calaamadda diiwaangelinta Shiinaha hadda.
Shiinaha waa waddan ugu horreeya faylasha. Waxay macnaheedu tahay in qofka diiwaangeliya astaamaha marka hore, kaasoo heli doona dhammaan xuquuqda u qaybinta iyo ka iibinta alaabada Shiinaha.
Sidee loo codsadaa patent-ka Shiinaha?
Ajaanibta, shirkadaha shisheeye iyo ururo kale oo ajnabi ah oo leh degenaansho rasmi ah ama xafiis ka diiwaangashan Shiinaha, waxay ku raaxeysan karaan isla daaweynta muwaadiniinta Shiinaha marka loo eego codsashada shatiyada iyo ilaalinta shatiga.
Ajaanibta, shirkadaha shisheeye iyo ururo kale oo ajnabi ah oo aan lahayn deganaansho caam ah ama xafiis ka diiwaangashan Shiinaha, waxay sidoo kale dalban karaan shatiyada laakiin waa inay la kulmaan mid ka mid ah shuruudaha 3 ee soo socda:
1. Heshiiskii lagu soo afjaray dalka uu codsadaha ka tirsan yahay iyo Shiinaha.
2. Heshiis caalami ah oo labada dalba ay qayb ka yihiin.
3. Shiinaha iyo waddanka uu codsaduhu ka tirsan yahay waxay ku saleysan yihiin mabda'a isu-celinta.
1. Codsaduhu wuxuu ku soo gudbinayaa arjiga iyo dukumintiyada loo baahan yahay gacanta lagu dhiibo ama khadka tooska ah oo lagu bixiyo khidmadaha.
2. CNIPA waxay heshaa arjiga waxayna sameysaa baaritaan horudhac ah (araajida hal-abuurka waxay ubaahantahay baaritaan dhab ah).